ကျွန်ုပ်၏ Huawei သည် Android ကုန်သွားသောအခါဘာဖြစ်သွားသနည်း Androidsis
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိစမတ်ဖုန်းသန်း ၂၀၀ ကျော်ကိုဈေးကွက်ထဲတင်ပို့သည့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအာရှကုမ္ပဏီ Huawei အတွက်အကောင်းဆုံးနှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အနည်းဆုံးကစီးပွားဖြစ်အတွက်ကတည်းက, အရောင်းအပိုင်း၌ရှိ၏ အစိုးရကပထမဆုံးငြင်းဆန်မှုနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည် ၎င်းတို့၏အော်ပရေတာများကို၎င်းတို့၏စမတ်ဖုန်းများရောင်းချခြင်းကိုတားမြစ်သည်။
ဤဆုံးဖြတ်ချက်အားစွပ်စွဲရသည့်အကြောင်းအရင်းမှာ Huawei သည်တရုတ်အစိုးရ၏နောက်ထပ်လက်မောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုစွပ်စွဲခံရခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ဆင့်မှာ ၎င်းကိုအနက်ရောင်စာရင်းတွင်ထည့်သွင်းပါ၊ ဤနည်းဖြင့်မည်သည့်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီမှ၎င်းနှင့်စီးပွားရေးမလုပ်နိုင်ပါ. အရေးအကြီးဆုံးအကျိုးဆက်ကတော့သင် Android ကိုကုန်သွားပြီဖြစ်သည်။ ဒီတားမြစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင့်မှာမေးခွန်းတွေရှိရင်၊ မင်းရဲ့သံသယတွေကိုရှင်းလင်းဖို့ဆက်ဖတ်ပါ။
မကြာသေးမီလများအတွင်းအမေရိကန်နှင့်တရုတ်နိုင်ငံတို့အကြားကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ၎င်းသည်နောက်ဆုံးအသုံးပြုသူများကိုအကျိုးသက်ရောက်စေမည့်စစ်ပွဲဖြစ်သည်။ မည်သည့်အရာအတွက်မဆိုအပြစ်တစုံတရာအတွက်အပြစ်မတင်သင့်သူများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဥရောပ၌ဖြစ်စေ၊ လက်တင်အမေရိကတွင်နေထိုင်သည်ဖြစ်စေအရေးမကြီးပါ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိပ်ကမ်းသက်တမ်းတိုးသည့်အခါငွေပေးချေရမည့်သူအားလုံးဖြစ်သည်။
ယခင်က၎င်းတို့၏တရားဝင်ဗားရှင်းတွင် Android မှစီမံခန့်ခွဲသော terminal များ ကုမ္ပဏီကအသိအမှတ်ပြုကြသည်ဂူဂဲလ် ၀ န်ဆောင်မှုများဖြစ်သောအက်ပလီကေးရှင်း၊ ဂျီမေးလ်၊ ယူကျု၊ ဂူဂဲလ်ဓာတ်ပုံများ၊ ဂူဂဲလ်မြေပုံများကို ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်သက်ဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်မပါဘဲအပလီကေးရှင်းများကိုတပ်ဆင်ပြီး Android မှစီမံခန့်ခွဲသည့် terminal တွင်သုံးရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒါကြောင့်တစ် ဦး လျှင် အမဲချိတ်Amazon Fire တက်ဘလက်တွေမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်း။
1 ကျွန်ုပ်၏ Huawei လုံးဝအလုပ်မလုပ်တော့ဘူးလား။ မဟုတ်ဘူး။
2 WhatsApp, Facebook နှင့်အခြားအသုံးချပရိုဂရမ်များကို ဆက်လက်၍ ငါသုံးနိုင်မလား။ ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူး။
3 Huawei ဆိပ်ကမ်းအသစ်များမည်သို့ဖြစ်လာမည်နည်း။ ကောင်းပါတယ်
4 ဤတားမြစ်ချက်သည်ကျွန်ုပ်၏ Huawei အာမခံအပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသနည်း။ ဘာမှမ
5 ပိတ်ဆို့မှုဘယ်လောက်ကြာမလဲ မင်္ဂလာပါ။
6 Huawei အတွက်အကျိုးဆက်များ
8 Huawei ကိုအခုဝယ်ဖို့ကောင်းလား။ မဟုတ်ဘူး
ကျွန်ုပ်၏ Huawei လုံးဝအလုပ်မလုပ်တော့ဘူးလား။ မဟုတ်ဘူး။
လွန်ခဲ့သောနာရီအနည်းငယ်ကတရားဝင် Android အကောင့်သည် ၀ န်ဆောင်မှုများကဲ့သို့သောရှင်းလင်းချက်ကိုတွစ်တာတစ်ခုထုတ်ဝေခဲ့သည် ဂူးဂဲလ်ပလေးနှင့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအသစ်ပြောင်းခြင်းများဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည် Huawei သည်လက်ရှိဈေးကွက်တွင်ရှိသည့်ဆိပ်ကမ်းများတွင်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၌ Huawei စမတ်ဖုန်းရှိပါက၊ အနည်းဆုံးအားယခုအချိန်တွင်မည်သည့်ပြproblemနာမျှမရှိဘဲဆက်လက်သုံးစွဲနိုင်လိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။
WhatsApp, Facebook နှင့်အခြားအသုံးချပရိုဂရမ်များကို ဆက်လက်၍ ငါသုံးနိုင်မလား။ ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူး။
အားလုံးမူတည်သည်။ Huawei အတွက်အမေရိကန်အစိုးရသည်မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိရှုပ်ထွေးစေလိုသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိပါ။ ဒါပေမယ့်သူကအများကြီး, အများကြီးမလုပ်နိုင်ပါတယ်။ လူကြိုက်အများဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းများဖြစ်သော Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter နှင့်အခြားသူများသည်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီများမှဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့ကိုအဆင်သင့်ဖြစ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ၊ ထို့ကြောင့်သူတို့သည် Huawei ၏ Android ဗားရှင်းတွင်ပြproblemsနာမရှိဘဲအလုပ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သို့သော်အမေရိကန်အစိုးရသည်ဟွာဝေအတွက်အရာများကိုများစွာရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်၊ Huawei မှထုတ်လုပ်သောဆိပ်ကမ်းများတွင်အသုံးမပြုရန်ကုမ္ပဏီများအားသူတို့၏ application များကိုပိတ်ဆို့ရန်ဖိအားပေးသည်. ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က VLC ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဤဆိပ်ကမ်းများနှင့်တိတိကျကျပြောရလျှင်သင်၏ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအင်မန်နေဂျာနှင့်သင်၏လျှောက်လွှာချွတ်ယွင်းမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။
ရှိပါကအသုံးပြုသူများ သူတို့က WhatsApp, Facebook နှင့်အခြားသူများကိုစျေးကွက်ရှိဆိပ်ကမ်းများ၌အသုံးမပြုနိုင်ပါအာရှ၏ထုတ်လုပ်သူကဆက်လက်ရောင်းချမည်ဆိုပါကစျေးကွက်အတွင်းသို့လွှတ်တင်မည့်နောက်ထပ်ဆိပ်ကမ်းများတွင်မူလျော့နည်းသွားသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဂူဂဲလ် ၀ န်ဆောင်မှုများမရရှိဘဲယူရို ၁၀၀၀ တန် terminal ကိုရောင်းချခြင်းသည်အလွန်ခက်ခဲသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Huawei ဆိပ်ကမ်းအသစ်များမည်သို့ဖြစ်လာမည်နည်း။ ကောင်းပါတယ်
အာရှကုမ္ပဏီကဈေးကွက်သို့ဖြန့်ချိမည့်နောက်ထပ်ဆိပ်ကမ်းများ တရားဝင် Android ဗားရှင်းဖြင့်အချိန်မရွေးစီမံနိုင်မည်မဟုတ်ပါယခုနှစ်တတိယသုံးလပတ်တွင်စျေးကွက်အတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်မည့် Android Pie သို့မဟုတ် Android Q တို့ဖြစ်သည့်လာမည့် Android ဗားရှင်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်လည်းဒီဆိပ်ကမ်း သူတို့သည်ဂူဂဲလ်အပလီကေးရှင်းများသို့လည်းဝင်ရောက်ခွင့်မရပါဆိုလိုသည်မှာ application store, Gmail, Google Photos, Google Maps, Google Drive ...
၎င်းတို့သည်ဂူဂဲလ်ကိုယ်တိုင်မှအသိအမှတ်ပြုထားခြင်းမရှိသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအပလီကေးရှင်းများအားဆက်လက်တပ်ဆင်ရန်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်။ ဂူဂဲလ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုလိုအပ်ခြင်းအားဖြင့်၊ အပလီကေးရှင်းများသည်အလုပ်မလုပ်ပါ။ Huawei သည် Android fork ကိုနှစ်အနည်းငယ်ကတည်းကလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Huawei ၏ဆော့ဝဲလ်များဖြစ်သော Android ကိုအခြေခံထားသည့် fork ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အပလီကေးရှင်းအားလုံးသည်အနည်းဆုံးအစတွင်သဟဇာတဖြစ်သည်။
ဤတားမြစ်ချက်သည်ကျွန်ုပ်၏ Huawei အာမခံအပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသနည်း။ ဘာမှမ
အမေရိကန်အစိုးရအနေဖြင့် Huawei သည်တရုတ်အစိုးရအား၎င်း၏ဆိပ်ကမ်းများသာမကဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်များမှတဆင့်သူလျှိုလုပ်နေသည်ဟူသောသံသယကိုအမြဲထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ အာရှထုတ်လုပ်သူသည်အမြဲငြင်းဆိုခဲ့ပြီး Donald Trump ၏အစိုးရမှသက်သေပြခြင်းမရှိကြောင်းစွပ်စွဲချက်.
၏ဖြစ်ရပ်အတွက် ထိုကဲ့သို့သောလေယာဉ်ပျက်ကျမှုခံစားခဲ့ရသောအခြားအာရှကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် ZTE, ဤအချိန်သည်အစိုးရ၏ကန့်သတ်ချက်များကိုကျော်လွှားရန်ဖြစ်သည် အမေရိကန်နည်းပညာကိုအမေရိကန်ကုမ္ပဏီများမှတားမြစ်ထားသောနိုင်ငံများတွင်ရောင်းချခြင်း။ အကြီးအကျယ်ဒဏ်ငွေပေးပြီး၎င်း၏ခေါင်းဆောင်မှုတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲပြီးနောက်အမေရိကန်အစိုးရသည်ဗီတိုအာဏာကိုရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။ Huawei မှာမူ၎င်းသည်ကွဲပြားခြားနားသည်။ အကြောင်းမှာထိုအကြောင်းပြချက်ကြောင့်အရေးယူခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်သူလျှိုသူလျှိုလုပ်သူများမှမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကမှယုံကြည်စိတ်ချရသောသက်သေပြနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
လူအပေါင်းတို့၏ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်ပါတယ် ယူနိုက်တက်စတိတ်မှဗီတိုအာဏာကိုရုပ်သိမ်းပြီးမှောင်မိုက်သောစာရင်းမှဖယ်ရှားခြင်းမပြုပါကနောင်တွင်အလွန်ရှုပ်ထွေးလိမ့်မည်။ ဂူဂဲလ် ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးကိုလက်လှမ်းမမှီဘဲကျွန်ုပ်တို့အများစုမနေထိုင်နိုင်သည့်ဆိပ်ကမ်းများကိုယူရို ၁၀၀၀ (သို့) ယူရို ၂၀၀ ဖြစ်ပါစေ၊ မဖြစ်နိုင်သည့်အလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အခြား application store တစ်ခုကကျွန်ုပ်တို့ကိုကမ်းလှမ်းသလောက်အများဆုံးအသုံးချ application များဖြစ်သော WhatsApp, Facebook, YouTube နှင့်အခြားသူများမရရှိနိုင်ပါ။ WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ပုံမှန်သုံးသောအခြား application များတပ်ဆင်နိုင်မည့် terminal တစ်ခု ဒါဟာလုံးဝအသုံးမကျဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းပြီဖုန်းခေါ်လျှင်, ဒါပေမယ့်အဘို့လည်းရှိပါတယ် အထူးဖုန်းများ.
Terminal များရောင်းချခြင်းကိုသာထိခိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်သောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည့်လက်ပ်တော့ပ်များ၏အကွာအဝေးကိုလည်းထိခိုက်လိမ့်မည်။ Intel သည်ထုတ်ကုန်များကို Huawei သို့ရောင်းချခြင်းကိုရပ်တန့်သွားလိမ့်မည်ဟုလည်းအတည်ပြုခဲ့သည်မှာအာရှထုတ်လုပ်သူများ၏လက်တော့ပ်များအတွက်ပရိုဆက်ဆာများကိုထောက်ပံ့သူဖြစ်သည်။ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်က၎င်းကွန်ပျူတာလည်ပတ်မှုစနစ်ကိုဒီကွန်ပျူတာများကိုဖြန့်ဝေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ Intel ပရိုဆက်ဆာမပါတဲ့ Laptop တစ်လုံး၊ (AMD (အခြားအမေရိကန်ကုမ္ပဏီတစ်ခု) နှင့် Windows မရှိဘဲ), အနာဂတ်နည်းနည်းသို့မဟုတ်လုံးဝမစျေးကွက်ရှိပါတယ်။
Android တွင်လူကြိုက်အများဆုံး application အများစုမှာအမေရိကန်ကုမ္ပဏီများမှဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာပိတ်ပင်ထားသောကြောင့်အစိုးရသည်တိုင်းပြည်နှင့်ဆက်ဆံရေးကိုပိုမိုဆိုးရွားစေရန်ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါ။ အကယ်လို့ဆော့ဗ်ဝဲကို hardware နဲ့ပါတ်သက်ပြီးချန်ထားရင်၊ အများဆုံးထိခိုက်မှုမှာ Qualcomm ဖြစ်နိုင်သည်။
များစွာသောသူတို့သည်အာရှရှိထုတ်လုပ်သူများဖြစ်သည့် Xiaomi, OnePlus, Vibo, Oppo ကဲ့သို့သောသူများဖြစ်သည် Qualcomm အနေဖြင့်၎င်းတို့၏ terminal များပရိုဆက်ဆာများကိုထောက်ပံ့သူအဖြစ်ယုံကြည်ပါ။ တရုတ်သည်၎င်းထုတ်လုပ်သူများကို Huawei ၏ Kirin ပရိုဆက်ဆာများသို့မဟုတ် MediaTek ထုတ်လုပ်သူများအားအသုံးပြုရန်ဖိအားပေးနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒီထုတ်လုပ်သူတွေကသူတို့ရဲ့စွမ်းအားလျော့နည်းတဲ့ပရိုဆက်ဆာတွေကိုအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခြင်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ရောင်းအားကိုထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့နိုင်တယ်။
တရုတ်အစိုးရသည်အမေရိကန်အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူများသို့မသွားနိုင်၊ မသွားသင့်သည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းတို့အများစုကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်တပ်ဆင်ထားသဖြင့်စက်ရုံများ၏လုပ်ငန်းအဆင့်ကိုထိခိုက်စေနိုင်သည့်အတွက်ဖြစ်သည်။ layoffs ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Huawei ကိုအခုဝယ်ဖို့ကောင်းလား။ မဟုတ်ဘူး
သင်၏ terminal ကိုသက်တမ်းတိုးရန်နှင့် Huawei မော်ဒယ်သည်သင်၏ ဦး စားပေးတစ်ခုဖြစ်လျှင်သင်၏စိတ်ကိုပြောင်းလဲရန်အချိန်ဖြစ်နိုင်သည်။ Huawei ဆိပ်ကမ်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားငွေရေးကြေးရေးအတွက်အတော်အတန်ကောင်းသောတန်ဖိုးတစ်ခုပေးသည်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက၊ Huawei ၀ ယ်ရန်အကြံသည်ယခုအချိန်တွင်အကောင်းဆုံးမဟုတ်ဟုထင်ရသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » ကျွန်တော့် Huawei ဘာဖြစ်လို့ Android ပျောက်သွားတာလဲ